Okpokoro nke Hawaii nọ n'ihe ize ndụ nke ikpochapụrụ na okpomoku ụwa | Network Meteorology
A na -echekwa coral nke Hawaii kpam kpam na okpomoku ụwa
Coral bụ otu n'ime ihe dịkarịsịrị ike maka okpomoku ụwa: ka okpomọkụ nke oke osimiri na-abawanye, ha ha nwere ọtụtụ nsogbu na-aga n'ihu na-eto eto n'ihi mbelata nke calcium, ihe dị mkpa ịnweta maka nhazi ya.
Na blọọgụ anyị kwurịtara ogologo oge banyere ọnọdụ nke Nnukwu Osimiri AustraliaMana coral dị na Hawaii adịghị mma. Ndi oru nyocha si na Coral Reef Ecology Laboratory, Hawaii Institute of Marine Biology edeputala a ihe nke atọ nke ịcha ọcha na Hanauma Bay Nature Reserve, n’agwaetiti Oahu.
Mgbe oké osimiri dị elu, ọ na-eme ka oké osimiri bụrụ acidic. Coral bụ ihe ntule na-enwe mmekọrịta mmekọrịta na algae: ebe osisi ndị a na-enye nitrogen, nri ha chọrọ ka ha too, coral na-echebe ndị a na-ese foto; Otú ọ dị, n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ algae na-ahapụ coral. Site n'ime nke a, obere nke nta ha na-ada mbà, na-acha ọcha ruo mgbe ha mechara nwụọ, nke bụ ihe mere 9,8% nke ndị nọ na Hanauma Bay Nature Reserve n'etiti 2014 na 2015.
Ọ bụ ezie na agbaala mbọ iji chekwaa usoro ihe dị ndụ dị mkpa, ndị ọrụ nyocha ahụ kwuru na ọ bụrụ na okpomoku ụwa aga n'ihu, Oké osimiri ga-anọgide na-amịpụta nnukwu carbon dioxide, yabụ ndị coral ndị dị n'akụkụ a nke ụwa ga-anọgide na-eyi egwu nke ịla n'iyi.. Ọ bụrụ na nke a mee, o yikarịrị ka nde ndị njem nleta na-aga ebe a kwa afọ ga-ahụ mgbanwe ahụ; ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ha, kamakwa ụdị anụ ọhịa dị iche iche bi ebe a.
I nwere ike ịgụ akwụkwọ zuru ezu ebe a (Ọ bụ n’asụsụ Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » A na -echekwa coral nke Hawaii kpam kpam na okpomoku ụwa
Mmetụta '' agwaetiti ọkụ '' ga-eme ka ọnụ ọgụgụ obodo mepere emepe nke mgbanwe ihu igwe okpukpu abụọ